China Yakakwira performance crankshaft yerabha mafuta chisimbiso cheTC mafuta chisimbiso 09283-32022 fekitori uye vagadziri | Xinchi
Yakakwira kuita crankshaft yerabha yemafuta chisimbiso cheTC mafuta chisimbiso 09283-32022
OE HERE.: 09283-32026 / 96051420/91120283/94535472 / 09283-32025 / 91120284 / 09283-32003 / 09283-32002 / 09283-320116 / 09283-32022 / 81-53236-00
Kunze: 47 mm
OE HERE. 09283-32026 / 96051420/91120283/94535472 / 09283-32025 / 91120284 / 09283-32003 / 09283-32002 / 09283-320116 / 09283-32022 / 81-53236-00
Saizi Dhayamita: 32mm
Kunze: 47 mm Kureba: 8mm
Mashoko Simbi goko inowedzera yerabha chaiyo
Ruvara Dema kana shava, kana zvinoenderana nezvaunoda.
Mari yekubhadhara T / T, Western mubatanidzwa kana sezvazvinodiwa
Nguva yokutora 5-10days muchitoro, 5-30days ekugadzira zvigadzirwa uye odha huwandu
Kushanda YEMAHARA, KALOS, SUZUKI
Iyo TC Oiri Seal yakanyatsogadzirirwa kuchengetedza mvura uye tsvina.
Irabha yakaputirwa kunze kwehupamhi inogadzira chisimbiso chakazara panzvimbo yacho.
Iyo simbi garter chitubu inovimbisa inogara ichimanikidza pane axle shaft pamusoro pehupenyu hwechisimbiso.
Yakakura yekutsiva yako yakashata mafuta chisimbiso.
Inogona kudzivirira guruva uye tsvina mukati memuchina, uye kudzivirira lubricating mafuta kubva kubuda.
Yakagadzirwa neyakanaka mhando zvinhu nechisimbiso chakasimba.
Inoderedza kushanda kwekushisa, kupfeka uye kukweshera.
Kuneta kusagadzikana uye kupfeka kusagadzikana, kuve nechokwadi chekushanda kwakanaka kwemudhudhudhu.
Zvinobudirira kudzivirira oiri kurasika uye chengetedza ivhu uye zvimwe.
Kuisa nyore, hapana shanduko inodiwa.
Zvisimbiso zvine simba zvinopa vatasvi rwendo rwakanaka.
Zvisimbiso zveOiri, inozivikanwawo seye shaft zvisimbiso, zvine radial lip mhando zvisimbiso izvo zvinonyanya kushandiswa kuchengetedza mafuta ekuzadza mumidziyo ine kutenderera, kudzoreredza kana kushinyira miseve. Iyo inotenderera shaft application yakajairika.
Chisimbiso chemafuta chinowanzo kuve nezvinhu zvitatu zvakakosha: iyo yekuisa chisimbiso, kesi yesimbi uye chitubu. Chinangwa chekuisa chisimbiso ndechekumisa iyo fluid kubva ichidonha pakati pe shaft nedzimba. Iyo simbi kesi ichapa kuomarara uye simba kuchisimbiso painenge ichinge yakabatwa mune yekubhowa kana yakadzoserwa groove. Iyo garter chitubu inovimbisa inogara ichimanikidza uye inochengetedza iyo radial simba kune iyo shaft, inotsvedza iyo yekuisa chisimbiso kumucheto wakatsanangurwa. Iyo garter chitubu inochengetedza iro radial simba rinoitwa nekuisa chisimbiso muromo wakakomberedza shaft pamusoro. Zvese zvinhu zvinofanirwa kusarudzwa zvichienderana nemamiriro ezvinhu umo chisimbiso chemafuta chinoshanda.
Kuitwa kwezvisimbiso izvi kunoenderana kusvika padanho rakaringana reyuniti mutoro inochengetedzwa pachisimbiso-shaft interface. Zvisimbiso izvi zvinomira nekumanikidzwa kwe15PSI uye kushanda kwadzo kunoenderana nematanho senge dhimoni dhayamita, shaft kumhanya, tembiricha inoshanda, mamiriro ebasa, nezvimwe.
Pashure: Zvakanakisa kutengesa zvigadzirwa AH8846G, 8-94235-369-0 4JA1 4JB1 Kumashure crankshaft mafuta chisimbiso 95 x 118 x 10
Zvadaro: Injini Code 2L 3L Auto Chikamu Dombo Valve Yakavhara Gasket YeToyota HILUX 2.4 D 11213-54050